युक्ति मरिकको सपना- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
२०५० सालतिर जागिर खानकै लागि सांसद हरि रायलाई १२ हजार रुपैयाँ पनि दिएका थिए । तर, त्यति गरेर पनि युक्ति मरिकले जागिर पाएनन् ।
भाद्र ३०, २०७५ तुलानारायण साह, कृष्णकुमार साह
काठमाडौँ — कथित महादलित डोम जातिका एक बाबु प्रथम मरिकका छोरा युक्ति मरिक दु:खजिलो गर्दै पढेर वकिल बन्ने क्रममा छन् भने युक्तिले आफ्नो छोरालाई डक्टर बनाइछाड्ने सपना देखेका छन् । समय, समाज र संघर्षमा आएको बदलाव डोमको यो बाबु–छोरा पुस्तामा देख्न सकिन्छ ।
एक दिन, प्रथम मरिक आफ्नो टोलको हुनेखाने शिक्षित परिवार पलट मण्डलको घर जान्छ । पलटका छोराहरू लेखपढ गर्न सक्ने थिए । प्रथम मरिकलाई गाउँ किनबेचबारे लेखिएको तमसुक पढाउनु थियो । तर, पलट मण्डलले उनलाई हप्काउँदै भन्छ, ‘तीन–तीन छोरा छन्, तिनलाई पढाइलिखाइ गराए भैगो नि । सधैँ मेरो घरमा आउनुपर्छ ? हामी तिम्रो कागज पढ्न बसेका हौँ र ? हाम्रो घरको काम कसले गरिदिन्छ ?’
लगभग ४० वर्षअघि सप्तरीको दक्षिणी गाउँ सखडा गोविन्दपुरमा भएको संवादको एउटा अंश हो यो । प्रथम मरिक घर फर्किन्छ र आफ्ना तीनै जना छोराहरूलाई बोलाएर पलट मण्डलले भनेका कुरा सुनाउँछ । तीनमध्ये जेठो छोरा युक्ति मरिक भन्छन्, ‘हामीलाई सिलेट र पेन्सिल ल्याइदिनू । हामी पनि पढ्छौँ ।’
घरमा पैसा थिएन । प्रथम मरिकले गहुँ बेचेर तीनवटा माटोको सिलेट र पेन्सिल किन्दिए । गाउँमा विद्यालय थिएन । कुनै व्यक्तिको घरमा टयुसन पढ्नुपर्ने हुन्थ्यो । प्रथम मरिकका तीनै छोराहरू गाउँको शिक्षक गाँेसाई मण्डलसँग टयुसन पढ्न थाले । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ— मरिक परिवारको एउटा नयाँ यात्रा ।
मधेसमा डोम जातिकाले आफ्नो थर मरिक पनि लेख्छन् । मधेसी समाजमा प्राय: सबै चाडपर्व तथा धार्मिक कामलगायत विवाह र श्राद्धमा डोमले बनाएको बाँसका सामग्री अनिवार्य चाहिन्छ । तर, सामाजिक संरचनाको पिंधमा रहेका कथित महादलित डोम जातिलाई अछूतको व्यवहार गरिन्छ । यहाँसम्म कि अरू दलित सुमदायका मानिससमेतले उनीहरूलाई छुँदैनन् । प्राय: डोम समुदायको झुपडी गाउँभन्दा अलिक पर हुन्छ । उनीहरू प्राय: भूमिहीन, अत्यन्त गरिब र निरक्षर हुन्छन् ।
मधेसी समाजमा डोम, कुम्हार, माली, हजाम, बढही तथा पुरोहितजस्ता समुदायका मानिसले गाउँ बाँडेका हुन्छन् । उनीहरूका जातीय परम्परा तथा सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताअनुसारको कार्यहरू सम्बन्धित गाउँमा मात्रै गर्न पाउँछन् । तर, डोम समुदायका लागि यो प्रथा बढी नै कडा छ । जातीय परम्पराअनुसारका कार्य गर्न डोम समुदायका मानिसबीच कानुनी रूपमा गाउँ किनबेच हुन्छ । र उनीहरूसँग कानुनी प्रमाणस्वरूप दुवै पक्षको हस्ताक्षरसहितको (तमसुक) कागजात हुन्छ । युक्ति मरिकका बुबा त्यही कागजात पढाउन पलट मण्डलको घर गएका थिए ।
शिक्षादीक्षा र संघर्ष
युक्ति मरिकको जन्म २०२१ साल भदौ १९ गते सप्तरीको दक्षिणी गाउँ छिन्मस्ता–९ (हाल छिन्मस्ता गापा–२) मा भएको थियो । सात–आठ वर्षमा पढ्न सुरु गरेका युक्तिले झन्डै दुई वर्षसम्म गोँसाई मण्डलसँग टयुसन पढे । लेखेको कुरा देखाउनलाई युक्तिले पहिला सिलेट भुइँमा राख्थे । त्यसपछि शिक्षकले भुइँबाट सिलेट उठाएर हेर्थे । हेरिसकेपछि शिक्षकले हेर्नुपर्ने र लेखेर दिनुपर्ने निर्देशन लेखेर फेरि त्यसै प्रकारले सिलेटलाई भुइँमा राखिदिन्थे । युक्तिले आफ्नो सिलेट फेरि भुइँबाट उठाएर लिन्थे । बाल्यकालमा यसरी एक अछूत विद्यार्थी र उच्च जातका शिक्षकबीच ‘शिक्षण संवाद’ हुन्थ्यो ।
त्यसो गर्नुको मुख्य कारण थियो— समाजमा व्याप्त छुवाछूत प्रथा । सिलेट सिधै लेनदेन गरेको भए शिक्षक गोँसाई मण्डललाई ‘छोइन्छ’ भन्ने बुझाइ थियो । कथित अछूत जाति डोमको बच्चालाई पढाउने काम गोँसाई मण्डलका लागि त्यति सहज थिएन । पढाइ क्रममा विद्यार्थीले कुनै गल्ती गर्दा शिक्षकले पातलो लठ्ठी लिएर पिट्ने (सजाय दिने) चलन थियो । तर, युक्ति मरिकले पढाइमा गल्ती गर्दा शिक्षक मण्डलले झटारो हानेर उनलाई पिट्थे । झटारो हान्दा ‘सिधै जीउमा छोइन्न’ भन्ने सोच थियो । झटारो ठयाक्कै कहाँ लाग्ने निश्चित हुँदैन थियो । एक दिन झटारो हान्दा युक्तिको खुट्टामा चोट लागेर धेरै रगत बगेको थियो । दुई वर्षसम्मको त्यो टयुसन पढाइमा युक्तिले वर्णदेखि शब्द, वाक्य र अनुच्छेदसम्म लेख्न सिकेका थिए । गणितमा जोड, घटाउ, गुणन र भागसँगै फ्रयाक्सन, गरहन, हुट्ठा, पौना, सबैया आदि पनि सिकेका थिए । त्यसपछि छिमेकी गाउँको कन्कट्टा निम्नमाविमा युक्तिको एकै पटक कक्षा ४ मा भर्ना भएको थियो ।
विद्यालय प्राधानाध्यापक महावीर चौधरीको सहयोगले मरिकलाई भर्ना र पढाइ पनि सहज भयो । तर, शिक्षा विषय पढाउने शिक्षक राजेश्वर झाले गरेको विभेद अहिले पनि उसको मानसपटलमा ताजै छ । त्यहाँबाट कक्षा ७ सम्मको पढाइ पूरा गरेर माध्यमिक तह शिक्षाका लागि नजिकको नर्घो विद्यालयमा भर्ना भए । प्रवेशिका परीक्षाको केन्द्र बर्साइन माध्यमिक विद्यालयमा थियो । बर्साइन उनको घरभन्दा निकै टाढा थियो । त्यसकारण उनलाई त्यही नजिकै कोठा भाडामा बस्नुपर्ने थियो । तर, कोठा त के कसैले उनलाई गोठमा बस्ने अनुमतिसमेत दिएन । त्यसकारण बर्साइनबाट तीन किलोमिटर पर एक स्वजातिको घरमा परीक्षासम्मका लागि बास पाए । परीक्षा केन्द्रबाट टाढा बसेका मरिकलाई आवतजावत गर्न सजिलो थिएन । शिक्षा विषयको परीक्षाको दिन उसको घडी बिग्रेको कारण उनी आधा घण्टा ढिलो पुगेका थिए । सुरुमा त भवनमा प्रवेशै दिइएन, पछि बल्लतल्ल प्रवेश पाए । तर, त्यस दिनको जाँच बिग्रियो । त्यस वर्ष उनी शिक्षा विषयमा फेल भएका थिए । अर्को वर्ष २०४० सालमा मात्रै प्रवेशिका परीक्षामा पास भए ।
त्यसपछि ऊ आईकम पढ्ने भनेर विहारको निर्मली गएका थिए । तर, अर्को वर्ष सप्तरीका धेरै विद्यार्थी पकलिहवा क्याम्पसमा जेटीए पढ्न गइरहेको देखेर उनी पनि त्यहीँ गएका थिए । पढाइमा लगनशील तथा मिहिनेती युक्ति मरिकले छात्रवृत्ति पनि पाए । सप्तरीका लगभग २५–३० विद्यार्थीमध्ये युक्तिसहित दुई जना मात्र जेटीए पास भएका थिए । यो २०४४ सालको कुरा हो ।
जागिरका लागि युक्ति अनेक नेताकहाँ धाउन थाले । एक दिन राजविराजका जगदीश झाको घर पुगेर अनुनय–विनय गरेको प्रसंग जति प्रयास गरे पनि उनले बिर्सन सकिरहेका छैनन् । झा पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश थिए र सप्तरीका एक प्रभावशाली नेता । एक जना ग्रामीण अगुवाका साथ उनी झाको घर गएका थिए । जागिरका लागि अनुनय गरेर झाको घर–कोठाबाट बाहिर निस्किनासाथै झाले नोकरलाई बोलाएर पानी हालेर कोठा सफा गर्न लगाएका थिए । आँखैअगाडिको यो दृश्य र घटना आफैंमा कहालीलाग्दो थियो ।
२०५० सालतिर रामचन्द्र पौडेल कृषिमन्त्री भएको बेला सप्तरीबाट कृषि मन्त्रालयमा जेटीएका लागि थुप्रै सिट खुलेका थिए । युक्तिले जागिरका लागि आफ्नो क्षेत्रका सांसद हरि रायमार्फत मन्त्रीसमक्ष सिफारिस गराउने प्रयास गरेका थिए । मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीलाई खुसी पार्नका लागि उसले सांसद रायलाई १२ हजार रुपैयाँ पनि दिएका थिए । सो रकम उनी प्रतिकठ्ठा २ हजारको दरले ४ कठ्ठा खेत बेचेर र ४ हजार ब्याजमा ऋण लिएर जम्मा पारेका थिए । तर, त्यति गरेर पनि मरिकले जागिर पाएनन् । खुसी पार्न दिएको सबै रकम ऋणमाथि ऋण मात्रै बन्यो ।
धेरै प्रयासपछि गजेन्द्रनारायण सिंह आपूर्तिमन्त्री भएका बेला उनले नेपाल आयल निगमको जनकपुर कार्यालयमा मासिक ज्यालादारीमा जागिर लगाइदिए । सरकार फेरिएपछि ज्यालादारीमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसँगै युक्ति मरिकको पनि जागिर गयो ।
नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा डोम जनसङ्ख्या १३ हजार २ सय ६८ छ । जबकि लगभग दस हजार (९,६२१) त प्रदेश दुईमा मात्रै छ । उनीहरूको आवादी सबैभन्दा बढी सप्तरी (१,८७५), दोस्रो सिरहा (१,५२६) र तेस्रो धनुषा (१,२२४) मा देखिन्छ । पूजा, चाडपर्वअनुसार बाँसका सामग्री तथा मधेसी समाजमा दैनिक जीवनयापनमा प्रयोग हुने डालो, ढकिया, हाते पँखालगायतका वस्तु डोमले बनाउने गर्छन् । तर, यिनै डोमका लागि मन्दिर प्रवेश र पूजा निषेध थियो ।
२०५३/५४ सालतिर युक्ति जनकपुरमै हुँदा कान्तिपुरमा छुवाछूतसँग सम्बन्धित एक लेख पढेका थिए । गुणराज लुइँटेलले उक्त लेख लेखेको उनी सम्झिन्छन् । लेखमा मुलुकी ऐनको धारा ११ बमोजिम सार्वजनिक स्थलमा छुवाछूत गर्नेलाई १ वर्ष जेल हुने लेखिएको कुरा पढेर युक्ति मरिक निकै खुसी भएका थिए । युक्तिले त्यस लेखलाई काटेर जनतसाथ राखेका थिए । जनकपुरमा जागिर सकिएपछि उनी त्यसपछि आफ्नो गाउँ फर्किए । त्यो लेख लिएर उनी छिन्मस्ता (सखडा) भगवती मन्दिरका पुजारी महाकान्त ठाकुरकहाँ पुगे । आफूहरू मन्दिर पस्न पाउनुपर्ने तर्क गरे । तर, पूजारी ठाकुरले मानेनन् । कानुनमा होला तर समाजको आफ्नै परम्परा छ भन्दै अनेक तर्क गरेर युक्तिलाई मन्दिर प्रवेश दिएनन् । ‘डोम मन्दिरभित्र पस्यो भने अनर्थ हुन्छ’ भन्ने तर्क पुजारीले गरिरहे । केही वर्ष यसरी नै बित्यो । त्यसपछि, युक्ति मरिकले आफ्नै जातिका केही मानिसलाई साथ लिएर २०५७ चैत महिनामा सखडा मन्दिर प्रवेश गर्न खोज्दा पुजारीहरूले डोम अगुवालाई निकै लछारपछार गरेका थिए । तैपनि मन्दिर पस्न दिइएन ।
केही समयपछि युक्ति मरिकको भेट सोनेलाल चौधरीसँग भयो । सोनेलाल एक्सन एड नामक संस्थामा कार्यरत थिए । सोनेलालले युक्तिलाई बालशिक्षा कक्षा सञ्चालनका लागि मासिक आठ सयको जागिर दिए । सोनेलालको सहयोगमा युक्ति फेरि मन्दिर प्रवेशको योजना बनाउन थाले । एक दिन उनले आफ्नै जातका केही थप मानिसलाई जम्मा पारेर सखडा मन्दिरमा बोका चढाउने योजना बनाए । पुजारीले फेरि पनि उनीहरूलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिएन । बाहिरैबाट बोका चढाएर पूजा गर्न भने । उनीहरूले मन्दिरभित्र मात्रै पूजा गर्ने अड्डी लिई बसे । पुजारीहरूले मन्दिर समितिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीलाई बोलाएका थिए । ती सबै डोमलाई मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने पक्षमा थिए । तर, त्यो घडी, स्थानीय प्रहरीले भने राम्रै सहयोग गरेको थियो । प्रहरीको सहयोगमा २०५८ सालमा छिन्नमस्ता (सखडा) मन्दिर प्रवेश पाएपछि युक्तिको आत्मविश्वास बढयो । यो अभियानलाई निरन्तरता दिने उनले ठाने ।
सखडा मन्दिरमा प्रवेश पाए पनि राजविराजका होटलहरूमा छुवाछूत कायमै थियो । युक्तिले २०६० सालमा स्थानीय तीन होटलविरुद्ध राजविराज अदालतमा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेका थिए । राजविराजका लागि त्यो पहिलो घटना थियो । फैसला युक्तिको पक्षमा भएको थियो । उनी झन् उत्साहित भएका थिए ।
भारदहस्थित कङ्काल्नी मन्दिरमा पनि डोमलाई मन्दिर प्रवेश निषेध थियो । डोम मन्दिरभित्र प्रवेश गर्‍यो भने ‘कि त घाँटी कटाउँछु कि त भारत गएर बस्छु’ भन्दै त्यहाँका मुख्य पुजारीले अड्डी लिएका थिए । युक्तिले त्यहाँ पनि प्रयास गरे । डोमहरू सामूहिक रूपमा २०६१ सालमा कङ्काल्नी मन्दिर प्रवेश गर्न सफल भएका थिए ।
युक्ति मरिक २०६१ सालमा महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस, राजविराजमा आईए भर्ना भएका थिए । २०६७ सालमा राजनीतिशास्त्रमा बीए पनि पास भए । आफ्नो समुदायका मानिसलाई कानुनी सहयोग गर्ने उद्देश्यले हाल उनी एलएलबी पढ्दै छन् । एलएलबी पास गरेपछि उनी डोम जातिमा पहिलो वकिल हुनेछन् ।
युक्तिका दुई छोरी र तीन छोरा छन् । छोरीहरूलाई घरबाहिर राखेर पढाउन नसकेकामा उनलाई पश्चात्ताप छ । डोम समुदायमा बच्चा काखमै भएको बेला, आमाको दूध खाने उमेरमै विवाह गरिदिने परम्परा छ । तर, छुवाछूत र बालविवाहविरुद्धको अभियानमा लागेका कारण युक्तिले आफ्ना छोरीको बालविवाह गरेनन् । पछि उनलाई छोरीहरूका लागि बेहुला पाउन निकै गाह्रो भएको थियो । जेठी छोरीलाई भारतको सुपौल तथा कान्छी छोरीलाई धनकुट्टामा विवाह गरेका छन् । पाँच सन्तानका बुबा युक्ति मरिकले भोगेका विभेदको तुलनामा कम होला तर अझै पनि उनका सन्तानले जीवनको हरेक मोडमा त्यस्तै विभेद भोगिरहेका छन् । गाउँबाहिर नयाँ ठाउँमा जाँदा जात र थर लुकाएर बस्नुपर्ने समस्या यथावत् छँदैछ ।
छोराहरूलाई साथमा लिएर युक्तिले डोम समुदायलगायत सम्पूर्ण दलितको उत्थानमा लाग्ने चाहना राखेका छन्, यसैका लागि उनी वकिल बन्दै छन् । साथै तीन छोरालाई तीन फरक पेसामा लगाउने सपनासमेत बुनेका छन् । मरिकका जेठा छोरा बीएड तेस्रो वर्षको फाइनल परीक्षा दिएर राजविराज बसेका छन् । कान्छो छोरा राजविराजमा सब–ओभरसियर पढिरहेका छन् । उनका तीनै छोरा पढ्नमा अब्बल छन् । माहिलो अलि बढी जेहेन्दार छन् । युक्तिले माहिलो छोरा दिनेशकुमार मरिकलाई डाक्टर बनाउने सपना सजाएका छन् । दिनेश १२ कक्षामा ७१ प्रतिशत अङ्क ल्याई उत्तीर्ण भएका छन् । हाल उनी काठमाडौंको एक होस्टलमा बसेर एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्दै छन् । यसपालि महाराजगन्ज र धरानमा प्रवेश परीक्षा दिने योजनामा छन् । यदि दिनेशले एमबीबीएस पढ्न पायो भने ऊ सम्भवत: डोम समुदायमा पहिलो डाक्टर हुनेछ । युक्ति मरिक भन्छन्, ‘आफू वकिल र छोरालाई डाक्टर बनाउने सपना बुनेको छु ।’
ओ कर्मनाशा !
भाद्र ३०, २०७५ सविता बिमली
काठमाडौँ — ओ कर्मनाशा !तिमै्र किनारमा उभिएरहेर्दै छु तिम्रो गतिकसरी बगिरहन सकेकी छयौ तिमीयी तमाम नदीभन्दा भिन्न भएरविपरीत धारमा ?!
तिमै्र किनारमा उभिएर
हेर्दै छु तिम्रो गति
कसरी बगिरहन सकेकी छयौ तिमी
यी तमाम नदीभन्दा भिन्न भएर
यो कस्तो बहाव हो?
जो उल्टो बग्दा पनि
विपरीत बग्नुको अपरिमित सौन्दर्य लिएर
अरुभन्दा सर्वथा भिन्न हुनुको गति !
बग्नु पनि कहाा सजिलो होला र !?
छिचोलेर सारा अवरोध
जसरी बग्छयौ नि तिमी
त्यो बगाइको सौन्दर्य
त्यस्तै विपरीत धारमा
बग्छु भन्छ जिन्दगी
फर्कन्छु भन्छ समय
फेरि उक्लन्छु भन्छ यात्री
यो वर्षामा पनि
शान्त रहेकी तिमी
यस्तै शान्त कसरी होला र?
मान्छेले बगाउन खोजेको
त्यसैले मलाई तिमी हुन मन छ
जसको स्वाभाविक विपरीतता
अनि नागबेली सुन्दरता
अनुभूत गर्न चाहन्छु,
मलाई तिमी हुन मन छ कर्मनाशा।।